China PROTMEX PT202A Digital 12V - 1000V AC Voltage detector Tsy mifandray Tester Pen Volt amin'izao fotoana izao Electric Test Pencil orinasa sy mpanamboatra | Protech
Ny vokatra dia afaka mandrefy ny herinaratra
Volana 1.Operating: AC Voltage: 12 ~ 1000V (50 / 60Hz);
Fahatsapana avo: 12 ~ 1000V;
Fahatsapana afovoany: 48 ~ 1000V;
2.Fahahenan-tena ambany: manavaka ny Live & Neutr;
4.Tontolo iainana fampiharana:
Temperature miasa: 0 ~ 40 ℃,
Temperature fitehirizana: -10 ~ 50 ℃;
5. Haavo: ≤ 85%;
6. Batterie: 2 x 1.5V AAA
1. Ny vokatra dia vita amin'ny akora manta avo lenta ary manana endrika mahazatra;
2. Saro-pady sy marina ny refy;
3. Kely habe ary maivana ny lanjany, mety entina;
4. Tsotra ny miasa ary mora ampiasaina
F: Inona ny MOQ-nao? Fotoana mitarika?
A: Tsy manana MOQ amin'ny vokatra rehetra izahay, PC 1 ihany koa OK. Saika ny vokatra rehetra dia ao anaty tahiry ho an'ny fandefasana entana haingana, matetika 3 andro fiasana, fa indraindray kosa hahemotra ny fampahalalana momba ny lojika.
F: Manaiky ny serivisy OEM / ODM ve ianao?
A: Samy raisina an-tanan-droa ny OEM sy ny ODM raha mbola mihaona amin'ny MOQ ianao ary aleonay ny baiko toy ny OEM sy ODM satria be ny habetsahana ary maharitra ny mpanjifa.
F: Inona ny serivisinao aorian'ny varotra sy ny fiantohana anao?
A: Herintaona ny fiantohana anay ary afaka manamboatra maimaim-poana ho anao izahay ao anatin'ny fiantohana raha mbola tsy natao manokana ilay olana. Raha misy olana manokana sy tsy misy fiantohana dia tokony handoa ny saram-pandefasana sy ny sarany fanamboarana ny mpividy raha ilaina. Ho an'ny entana madinidinika dia afaka mandefa fanoloana maimaimpoana amin'ny filaminana manaraka isika.
F: Inona ny fe-potoana fandoavanao vola sy ny fotoam-pandraharahana?
A: Azonao atao ny mandoa vola aminay amin'ny alàlan'ny paypal, wechat, famindrana banky, misy ny fomba OK. Ho an'ny ohatra alefanay amin'ny alàlan'ny express toy ny DHL, EMS, UPS, Fedex, Aramex sns, shippment an-dranomasina ary shippment kamiao OK rehetra. Ho an'ny teny fandraharahana , FOB, EXW, DAP, CIF dia nekena daholo.
F: Ahoana no ahafahanay matoky anao? Ary ahoana no ahitanay anao raha tsy mandefa ny vokatra ianao?
A: Any amin'ny Distrikan'i NanShan, Shenzhen izahay, azonao atao ny mangataka amin'ny namana sinoa rehetra mba hitsidika anay. Aorian'ny fametrahana ny kaomandinao, raha tsy mandeha ara-potoana izahay dia afaka mitaraina aminay. Raha mandoa escrow na paypal ianao dia azo antoka kokoa aza. Azonao atao ny mahita anay amin'ny tranokala / mailaka amin'ny fotoana rehetra (24 ora * 7 andro), raha tsy mamaly ara-potoana izahay dia mety matory mandritra ny alina dia hamaly anao izahay.
F: Ahoana ny fametrahana baiko?
A: Azonao atao ny misafidy ny maodely sy ny habetsaky ny zavatra tadiavinao, avy eo manamarina ny saram-pandefasana izahay ary mandefa anao ny faktiora Proforma handoavana. Ny fandoavam-bola an-tserasera amin'ny alàlan'ny famindrana banky dia ekena, ny hafa koa OK. Aorian'ny fandoavanao anay dia halefanay mivantana any amin'ny adiresinao, avy eo mandoa telefaona avy any an-toerana ianao mba handoavan-ketra raha ilaina, aorian'izay dia atateriny aminao. Aza adino ny manome anay hevitra raha afa-po amin'ny vokatra sy ny serivisinay ianao.
Teo aloha: PROTMEX PT19D Digital Hygrometer Indoor Thermometer Temperature sy Humidity Gauge Monitor Indikator Thermometer Room